मर्कूस ९ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद
९ उहाँले तिनीहरूलाई यसो पनि भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, यहाँ उभिरहेकाहरूमध्ये कोही-कोही यस्ता छन्‌, जसले परमेश्वरको राज्य स्थापित भइसकेको नदेखेसम्म कुनै हालतमा मृत्यु चाख्नेछैनन्‌।” २ यसको छ दिनपछि पत्रुस, याकूब र यूहन्नालाई येशूले एउटा अग्लो डाँडामा लैजानुभयो र त्यहाँ तिनीहरूबाहेक अरू कोही थिएन। तब तिनीहरूको अगाडि उहाँको रूप परिवर्तन भयो। ३ अनि उहाँको लुगा यति सेतो र चम्किलो भयो कि त्यति सेतो त संसारको कुनै पनि धोबीले बनाउन सक्दैन। ४ साथै, एलिया र मोशा एकसाथ तिनीहरूसामु देखा परे र उनीहरू येशूसित कुराकानी गरिरहेका थिए। ५ तब पत्रुसले येशूलाई भने: “रब्बी,* हामी यहीं बस्नु उचित हुन्छ। त्यसैले हामीलाई तीन वटा पाल टाँग्न दिनुहोस्। एउटा तपाईंको लागि, एउटा मोशाको लागि अनि एउटा एलियाको लागि।” ६ खासमा, तिनी के भन्ने भनेर अलमल्लमा परेका थिए, किनकि तिनीहरू असाध्यै आत्तिएका थिए। ७ अनि बादल आएर तिनीहरूलाई ढाक्यो र बादलबाट यस्तो आवाज आयो: “यिनी मेरो प्यारो छोरा हुन्‌; तिमीहरूले उनको कुरा सुन।” ८ तर अकस्मात्‌ यताउता हेर्दा तिनीहरूले आफूसित येशूबाहेक अरू कसैलाई देखेनन्‌। ९ डाँडाबाट तल ओर्लंदै गर्दा उहाँले तिनीहरूलाई मानिसको छोरा मृत्युबाट नब्यूँतेसम्म आफूले देखेको यो कुरा कसैलाई नबताउनू भनी स्पष्ट चेतावनी दिनुभयो। १० तिनीहरूले यो कुरा मनमा लिए तर उहाँ मृत्युबाट ब्यूँतनुको अर्थ के हुन सक्छ भनेर आपसमा छलफल गरे। ११ अनि तिनीहरूले उहाँलाई यस्तो प्रश्न सोध्न थाले: “पहिला एलिया आउनु आवश्यक छ भनेर शास्त्रीहरू किन भन्छन्‌ त?” १२ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “एलिया साँच्चै पहिला आउनेछन्‌ र सबै कुरा पुनर्स्थापना गर्नेछन्‌। तर मानिसको छोराले थुप्रै दुःख भोग्नुपर्नेछ र ऊ कुनै मोलको गनिनेछैन भनेर उसको विषयमा किन लेखिएको छ त? १३ तर म तिमीहरूलाई भन्छु, वास्तवमा एलिया आइसके अनि धर्मशास्त्रमा उनको विषयमा लेखिएझैं तिनीहरूले उनीसित मनपरी व्यवहार गरे।” १४ उहाँहरू जब अरू चेलाहरू भएको ठाउँ नजिक पुग्नुभयो, तब एउटा ठूलो भीड चेलाहरूको वरिपरि जम्मा भएको र शास्त्रीहरूले तिनीहरूसित वाद-विवाद गरिरहेको उहाँहरूले देख्नुभयो। १५ तर भीडमा भएका सबै जना उहाँलाई देख्नेबित्तिकै छक्क परे अनि दौडँदै गएर उहाँलाई स्वागत गर्न थाले। १६ अनि उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “तिमीहरू तिनीहरूसित के वाद-विवाद गरिरहेका छौ?” १७ अनि भीडबाट एक जनाले उहाँलाई यस्तो जवाफ दिए: “गुरुज्यू, मैले आफ्नो छोरालाई तपाईंकहाँ ल्याएको थिएँ, किनकि दुष्ट स्वर्गदूत बास गरेकोले ऊ गुँगो भएको छ। १८ अनि जहाँसुकै होस्, त्यसले छोपेपछि ऊ भुइँमा पछारिन्छ, फींज काढ्छ, दाह्रा किट्छ अनि शिथिल हुन्छ। त्यसैले मैले तपाईंका चेलाहरूलाई त्यसलाई धपाइदिन भनेको थिएँ तर तिनीहरूले सकेनन्‌।” १९ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “ए विश्वास नभएको पुस्ता, म तिमीहरूसित कतिन्जेल रहूँ? म तिमीहरूलाई कतिन्जेल सहूँ? खै, उसलाई मकहाँ ल्याओ।” २० त्यसैले तिनीहरूले उसलाई उहाँकहाँ ल्याए। तर उहाँलाई देखेपछि त्यो दुष्ट स्वर्गदूतले उसलाई अँठ्यायो अनि ऊ भुइँमा पछारियो र लडीबुडी गर्दै फींज काढ्न लाग्यो। २१ अनि उहाँले उसको बुबालाई सोध्नुभयो: “उसलाई यस्तो हुन थालेको कति भयो?” तिनले भने: “बच्चैदेखि। २२ बेलाबेलामा त्यसले उसलाई कहिले आगोमा त कहिले पानीमा खसालेर मार्न खोज्छ। यदि तपाईं केही गर्न सक्नुहुन्छ भने हामीमाथि टिठाउनुहोस् र हामीलाई मदत गर्नुहोस्।” २३ येशूले तिनलाई भन्नुभयो: “ ‘यदि तपाईं केही गर्न सक्नुहुन्छ भने’ भनी तिमी किन भन्छौ? विश्वास छ भने सबै कुरा हुन सक्छ।” २४ त्यस केटाको बुबाले ठूलो स्वरमा कराउँदै तुरुन्तै यसो भने: “मसित विश्वास छ! तर मेरो विश्वासलाई अझै बलियो बनाइदिनुहोस्!” २५ तब एउटा भीड उहाँहरूतिर दौडँदै आएको देखेर उहाँले त्यस दुष्ट स्वर्गदूतलाई हप्काउँदै यसो भन्नुभयो: “ए गुँगो र बहिरो दूत, म तँलाई उसबाट निस्केर आउन र फेरि कहिल्यै उसमा बास नगर्न आदेश दिन्छु।” २६ अनि ठूलो स्वरले त्यो चिच्यायो र उसलाई अँठ्याउनुसम्म अँठ्याएपछि ऊबाट निस्केर गयो। त्यसपछि ऊ मुर्दाझैं भयो र धेरै जना यसो भन्न लागे: “केटो त मऱ्यो!” २७ तर येशूले हात समाएर उसलाई उठाउनुभयो र ऊ उठ्यो। २८ उहाँ एउटा घरभित्र पस्नुभएपछि उहाँका चेलाहरू आएर उहाँलाई सुटुक्क सोध्न थाले: “हामीले किन त्यसलाई धपाउन सकेनौं?” २९ उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “यस किसिमको चाहिं प्रार्थनाविना निस्कँदैन।” ३० त्यो ठाउँ छोडेपछि उहाँहरू गालील भएर जानुभयो र यो कुरा कसैले थाह नपाओस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्थ्यो। ३१ किनकि उहाँ आफ्ना चेलाहरूलाई यसो भनेर सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो: “मानिसको छोरालाई धोका दिइनेछ अनि उसलाई मानिसहरूको हातमा सुम्पिइनेछ र तिनीहरूले उसलाई मार्नेछन्‌ तर मारिए तापनि तीन दिनपछि ऊ ब्यूँतनेछ।” ३२ तिनीहरूले उहाँको कुरा बुझेनन्‌ तर पनि उहाँलाई सोध्न तिनीहरू डराए। ३३ तब उहाँहरू कफर्नहुम पुग्नुभयो। अनि उहाँ घरभित्र छँदा उहाँले तिनीहरूलाई सोध्नुभयो: “बाटोमा तिमीहरू के बहस गर्दै थियौ?” ३४ तिनीहरू चूप बसे, किनकि तिनीहरूले बाटोमा आफूहरूमध्ये को ठूलो हो भनेर बहस गरेका थिए। ३५ उहाँ बस्नुभयो अनि बाह्रै जनालाई बोलाएर भन्नुभयो: “यदि कोही सबैभन्दा ठूलो बन्न चाहन्छ भने ऊ सबैभन्दा सानो बन्नै पर्छ र सबैको सेवक हुनै पर्छ।” ३६ अनि उहाँले एउटा सानो बालकलाई ल्याएर तिनीहरूको बीचमा उभ्याउनुभयो र उसलाई अँगालो हाल्दै तिनीहरूलाई यसो भन्नुभयो: ३७ “जसले मेरो नाममा यस्तै कोही एउटा सानो बालकलाई स्वीकार्छ, उसले मलाई स्वीकार्छ; अनि जसले मलाई स्वीकार्छ, उसले मलाई मात्र होइन तर मलाई पठाउनुहुनेलाई पनि स्वीकार्छ।” ३८ यूहन्नाले उहाँलाई भने: “गुरुज्यू, एक जना मानिसले तपाईंको नाम लिएर दुष्ट स्वर्गदूतहरूलाई धपाइरहेको हामीले देख्यौं र उसलाई हामीले रोक्न खोज्यौं, किनकि ऊ हामीसँग हिंड्दैन।” ३९ तर येशूले भन्नुभयो: “उसलाई रोक्न नखोज, किनकि जसले मेरो नाम लिएर शक्तिशाली काम गर्छ, उसले हतपती मेरो बदनाम गर्दैन; ४० किनकि जो हाम्रो विरुद्धमा हुँदैन, ऊ हाम्रै पक्षमा हुन्छ। ४१ अनि जसले तिमीहरू ख्रीष्टका चेलाहरू हौ भनी सम्झेर तिमीहरूलाई एक कचौरा पानी पिउन दिन्छ, म तिमीहरूलाई साँचो-साँचो भन्छु, त्यसले कुनै पनि हालतमा आफ्नो इनाम गुमाउनेछैन।” ४२ तर यदि कसैले ममाथि विश्वास गर्ने यी सानाहरूमध्ये एक जनालाई ठेस पुऱ्याउँछ भने त्यस्तालाई त ठूलो जाँतो* घाँटीमा झुन्ड्याएर समुद्रमा डुबाइदिनु नै बेस हो। ४३ “यदि तिम्रो हातले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ* भने त्यसलाई काटिदेऊ, किनकि सधैं बलिरहने गेहेन्नाको आगोमा * दुवै हातसहित फ्याँकिनुभन्दा डुँडो भएर जीवन* पाउनु नै तिम्रो लागि बेस हो। ४४ * — ४५ यदि तिम्रो खुट्टाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई काटिदेऊ, किनकि गेहेन्नामा* दुवै खुट्टासहित फ्याँकिनुभन्दा लङ्गडो भएर जीवन पाउनु नै तिम्रो लागि बेस हो। ४६ * — ४७ यदि तिम्रो आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लगाउँछ भने त्यसलाई निकालेर फालिदेऊ, किनकि कानो भएर परमेश्वरको राज्यमा पस्न पाउनु नै दुवै आँखासहित गेहेन्नामा फ्याँकिनुभन्दा तिम्रो लागि बेस हो। ४८ किनकि त्यहाँ कीरा कहिल्यै मर्दैन र आगो कहिल्यै निभ्दैन। ४९ “नुन छर्केझैं सबैमा आगो छर्किनै पर्छ। ५० नुन राम्रो हो तर यदि नुनको नुनिलोपन हरायो भने त्यसलाई तिमीहरू फेरि केले नुनिलो बनाउनेछौ? आफूलाई नुनिलो बनाओ र आपसमा शान्ति कायम राख।”
^ मर्कू ९:५ * मत्ती २३:७ को फुटनोट हेर्नुहोस्।
^ मर्कू ९:४२ * वा, “गधाले घुमाउने जाँतो।”
^ मर्कू ९:४३ * शाब्दिक, “ठेस पुऱ्याउँछ।”
^ मर्कू ९:४३ * यसले सधैंका लागि नाश हुनुलाई बुझाउँछ।
^ मर्कू ९:४३ * अर्थात्‌, “अनन्त जीवन।”
^ मर्कू ९:४४ * विभिन्न प्रमुख पुराना ग्रीक पाण्डुलिपिहरूमा यो पद पाइँदैन; तर बाइबलका केही अनुवादहरूमा भने यो पदमा पाइन्छ।
^ मर्कू ९:४५ * यरूशलेमबाहिर फोहरमैला जलाउने ठाउँ। अतिरिक्त लेख ९ हेर्नुहोस्।
^ मर्कू ९:४६ * विभिन्न प्रमुख पुराना ग्रीक पाण्डुलिपिहरूमा यो पद पाइँदैन; तर बाइबलका केही अनुवादहरूमा भने यो पदमा पाइन्छ।